Ihe Nleta 5 kacha mma maka saịtị Ecommerce | ECommerce ozi ọma
Abịa na web hosting maka ụlọ ahịa dị n'ịntanetị, ọ bụ maka ogo ọrụ yana ọnụọgụ atụmatụ ga-eme ka arụmọrụ azụmaahịa dịkwuo elu. N'echiche a, n'okpuru anyị na-ekekọrịta ndị ọbịa kacha mma maka saịtị Ecommerce nke kwụpụrụ iche maka inye ọrụ kacha mma na njirimara kacha mma.
1 1. Bochum Isi Iyi
2 2. Ụlọ ahịa nke ọma
3 3. Oghere
4 4. Guzosie ike
5 5. Ọgbọ 1 Bochum
1. Bochum Isi Iyi
Este Bochum maka Ecommerce na-arụ ọrụ kemgbe 2005 ma ugbu a ka a na-ewere ya dị ka otu n'ime ntanetị weebụ kachasị mma maka ụlọ ahịa dị n'ịntanetị. Companylọ ọrụ ahụ na-enye VPS yana Bochum Bochum raara onwe ya nye ọnụahịa ezi uche, ọ na-enye ụyọkọ ntọala RAM maka Windows na Linux, gbakwunyere na ọ na-enyekwa adreesị IP ọzọ na asambodo nchekwa SSL.
2. Ụlọ ahịa nke ọma
Ọ bụkwa otu n'ime mma kacha mma maka Ecommerce, karịsịa akwadoro maka ụlọ ọrụ obere na ọkara. Ọ na-enye ngwugwu ọrụ zuru oke iji mejuputa ụlọ ahịa dị n'ịntanetị. Nke a gụnyere ndebiri ndebiri, SEO kachasị sistemụ e-commerce, nchekwa data, gbakwunyere usoro omenala na akaụntụ email na-akparaghị ókè.
Este Hostinglọ ahịa ụlọ ahịa dị n'ịntanetị na-enye ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụdị ọrụ nnabata ọ bụla, tinyere sava, kesara ma raara onwe ya nye igwe ojii. Nwekwara ike ịhọrọ n'etiti sistemụ arụmọrụ Windows na Linux ma ọ bụ ọbụlagodi iji ma maka ụgwọ ọzọ. Ọ na-enye nkwado teknụzụ 24/7, ma na nkata na site na ekwentị.
4. Guzosie ike
Este Storelọ ahịa ụlọ ahịa Ecommerce na-enye ngwọta nchekwa jikwaa ozi nzuzo nkeonwe. Ọ na-enye ígwé ojii nchịkọta, data data na data mgbake ọrụ ma ọ bụrụ na ọdịda.
5. Ọgbọ 1 Bochum
Na mmechi, nke a bụ Ecommerce mba na-enye raara onwe ya nye Bochum, colocation, na ọrụ ntanetị. A na-atụ aro ya maka ụlọ ọrụ ọkara na nnukwu ụlọ ọrụ; ụlọ ọrụ data dị na Europe na North America.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » mba » Ndị ọbịa 5 kacha mma maka saịtị Ecommerce
Top 5 nke kacha mma Ecommerce nyiwe maka 2016